I-Davis & Elkins I-Admissions yeekholeji: UMTHETHO U-Scores ...
I-Admissions ye-Davis ne-Elkins College
I-Admissions ye-Davis ne-Elkins kwiNkcazo yokuHlola:
I-Davis ne-Elkins College inezinga lokumkela i-50%, kwaye inenkqubo yokwamkelwa okukhethiweyo. Abafundi baya kufuneka badinga amanqaku kunye neemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo eziphakathi okanye ezingcono. Ukufaka isicelo, abafundi baya kufuneka bahambise isicelo se-intanethi, amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, kunye neempendulo eziphakamileyo zezikolo. Khangela iwebhusayithi yeziko leemfuno zeemfuno ezininzi kwaye ulungiselele ukutyelela i-campus.
Ipesenti yabafaki zicelo zivunyiwe: 50%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 420/530
ISAT Math: 440/530
UMTHETHO WOMTHETHO: 17/23
UMTHETHO IsiNgesi: 16/23
UMTHETHO UMathe: 16/22
I-Davis & Elkins College Inkcazo:
I-Davis ne-Elkins College iyiminyaka emine, ikholeji yangasese e-Elkins, eWest Virginia. Elkins, idolophu engama-8,000, inezobugcisa obuqinileyo kunye nomculo okhoyo, kunye nemikhosi emininzi yemimandla kulo nyaka. Kwakhona kuthiwa iD & E, ikholeji yasungulwa ngo-1904 kwaye idibene neCawa yePresbyterian. Ikholeji encinci isekela abafundi bayo abangama-800 abanomlinganiselo wemfundo / umgangatho we-faculty of 12 ukuya ku-1. I-D & E inikezela ngeentlobo zezifundo ze-bachelor's, izihlobo kunye neenkqubo zangaphambi kwezobugcisa kuzo zonke izifundo zezifundo. Ezi zifundo ziquka i-Accounting, Imfundo, isiNgesi, i-Nursing kunye neCriminology.
Iiprogram zangaphambili zengcali ziquka i-Pre-Dental, Pre-Law, kunye noPhando lwezilwanyana zangaphambili. Abafundi banokuzidibanisa zabo eziphambili, ngokusekwa kweendlela ezingaqhelekanga.
Ukubandakanyeka kwabafundi ngaphandle kweklasi, i-D & E ihlala kwiklabhu yabafundi abangama-35 kunye nemibutho equka ubume bobuzwe obunye.
Kukho amaqela amanqanaba emfundo, imibutho yezemidlalo / yokuzonwabisa, kunye nobugcisa obuhle, umculo, kunye namaqela okudansa. ISebe leZiko eliMnandi kunye noBugcisa bobuGcisa kunye ne-Augusta Heritage Centre liyingxenye enkulu yobomi bekampus, ukuzisa umculo kunye nokuzonwabisa kwi-D & E abafundi. Iziko libonelela ngeeveki (kwaye zide) kwiinkalo ezifana ne-Swing, i-Bluegrass, i-Irish, i-Cajun kunye nomculo waseMelika wokuqala. Kwi-front yezemidlalo, ii-D & E Senators zikhuphisana kwizinga le-NCAA ICandelo le-Greater Midwest Athletic Conference (G-MAC) ngezemidlalo kubandakanya ukubhukuda kwamadoda kunye nabesifazane, ibhola le-tennis kunye nebhola.
Ubhaliso lwabonke: 805 (bonke abagqwesileyo)
Ukuphulwa kwesini: 41% Amadoda / 59% Abafazi
Imfundo kunye neMali: $ 28,842
Iincwadi: $ 1,250 ( kutheni na? )
Igumbi neBhodi: i-$ 9,800
Ezinye iindleko: $ 2,858
Iindleko ezipheleleyo: $ 42,750
I-Davis ne-Elkins I-Financial Aid Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 20,741
Imali: $ 6,659
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Ulawulo lwezeShishini, iCriminology, iMfundo eQalayo, i-Exercise Science, History, Education Physical, Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 66%
Izinga lokuQinyezelwa koNyaka-4: 32%
Ezemidlalo zaMadoda: iBhola, iNgcahla, I-Track and field, I-Cross Cross, iTennis, iBhola yeBhola, iGalofu
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ibhola lebhola, iBolleyball, Izwe eliphambeneyo, i-Soccer Softball, I-Track and Field, Swimming
Ukuba uthanda i-Davis ne-Elkins College, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
IYunivesithi yaseWest Virginia: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Ikholeji yaseRoanoke: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
I-Bridgewater College: IProfayili
I-Collegefield State College: IProfayili
Ikholeji yaseMarietta: iProfayili
UMarshall University: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
I-Bethany College: IProfayili
IAlk Forest Forest Admissions
Iikholeji zaseVirginia eziphezulu
I-Walla Walla University
Kwi-University of Chowan
Iyiphi Impembelelo I-Tryptophan Yakho KwiQumrhu Lakho?
McDaniel Ikholeji ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Indlela yokwenza i-Fuse Fireworks Yakho Yomzimba
Ukholo luka-Jimmy Stewart
Imbali yeThelevishini - uCharles Jenkins
I-Jaques Derrida I-Grammatology: I-40 yeminyaka
I-Synopsis ye-Opera ye-Mozart, i-Idomeneo
UFriedrich Nietzsche ngoBulungisa noLingana
Iingoma ezikhusela uGeorge W. Bush kunye neMfazwe e-Iraq